सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीले दिए तीन गृहकार्य
रिपोर्ट नेपाल | 2021 Jul 21 | 07:31 am	229
काठमाडाैं, साउन ६ः नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा रहेको समस्या समाधान गर्न सचिवहरूलाई गृहकार्य दिएका छन् । सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण सोध्दै समस्या समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गृहकार्य दिएका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण र त्यसको समाधान खोज्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत नै हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले बहाना नचल्ने पनि बताए । विकास खर्च धेरै भएका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट खर्च संकुचित हुँदै गएको छ । साथै, आयोजनामा स्थानीयको सहभागिता तथा अनुगमनको कमिका कारण पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले सचिवहरूसँग मुख्य रुपमा तीन कुराको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘के कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकेन ? असारमा खर्चको अनुपात बढी हुनुको कारण के हो ? र कसरी खर्च गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने विषयमा खोजी गरेर मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यलय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । साथै कर्मचारीले चाहे जसरी काम गर्न नसक्नुका पछाडि रहेका कारणसमेत आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, शर्माले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले के गर्न सक्छ, त्यो गर्ने तर समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा मन्त्रीको मात्र नभएर कर्मचारीको समेत दोष रहेको भन्दै शर्माले हुन नसक्ने कामलाई तोकेर नै हुन्न भन्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘नहुने कुरा हुँदैन भन्न किन सक्नुहुन्न ?’ स्रोतले भन्यो ‘मन्त्रीले भन्नेबित्तिकै यो गर्नैपर्छ भन्ने छैन । तपाईहरूको पनि दोष छ भनेर ब्रिफिङ गर्नुभयो ।’ सचिवहरूको दोष भने तुलनात्मक रुपमा कम रहेको शर्माले स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई आफ्नो अनुभवको प्रयोग गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व समय समयमा परिवर्तन भइरहने भन्दै सामान्य कर्मचारीबाट सचिव हुँदासम्मको अनुभव प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार शर्माले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
शर्माले भेटघाटमा अव्यवस्थित विकास कार्यक्रम, योजनाविहीन आयोजना तथा राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित योजना अगाडि बढाउनमा कर्मचारीको समेत दोष रहेको बताए । यसमा मन्त्रीलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले मिलेर अगाडि बढ्न आह्वान गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बिना बजेटका योजना तथा कार्यक्रमसमेत छुट्याएर ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै भेटघाटका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको भन्दै यस विषय छलफल गर्नसमेत आह्वान गरे । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावसम्म देउवा सरकार नै कायम रहने भएकाले आगामी वर्ष पनि उस्तै समस्या लिएर नआउन पनि सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् । काराेबार दैनिकबाट